Infographic: Otu Netwọk Ntanetị Na-emetụta Ndụ Anyị | Martech Zone
Taa ọhaneze mgbasa ozi nwere ọrụ dị mkpa anyị ga-arụ na ndụ anyị. Ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa na-eji ha ekwurita okwu, nwee obi ụtọ, kpakọrịta, nweta akụkọ, chọọ ngwaahịa / ọrụ, ụlọ ahịa, wdg.
Afọ ole ị dị ma ọ bụ ebe i mere adịghị mkpa. Netwọk mmekọrịta ga-emetụta usoro ị na-eme kwa ụbọchị n'ụzọ dị mkpa. Can nwere ike ịgakwuru ndị nwere mmasị yiri nke gị ma wulite ọbụbụenyi na-adịgide adịgide ọbụlagodi na-enweghị aha.
Nwere ike imere ọtụtụ ndị ọzọ ebere n'ụwa niile naanị site na iji otu hashtag. Ọbụna ị gaghị egosi ha ezigbo foto gị, mana ha na ọdịnaya gị ga-emekọrịta ihe.
Ndị mmadụ niile sitere na ọnọdụ akụ na ụba na nke ọdịbendị dị iche iche na-eji netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta. N'ikwu eziokwu, o siri ike iche n'echiche ụbọchị na-enweghị mgbasa ozi mmekọrịta.
Ihe a niile bụ naanị mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na ndị mmadụ n'otu n'otu. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị gọọmentị, ndị nwe ụlọ mgbasa ozi ọdịnala, ndị na-anụ kpakpando, ndị a ma ama, na ndị niile nwere mmetụta na-ejikwa netwọk ndị a na-agbasa ozi ha.
Ọtụtụ mmadụ tụkwasara obi na soshal midia karia ụlọ ọrụ mgbasa ozi gọọmentị n'ihi na ha chere na ndị na-elekọta mmadụ ka mma.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla dị mkpa n'ụwa anaghị ekwu banyere ya na ntanetị. Ya mere ntanetị ntanetị na ọdịnaya ndị ọrụ na-emepụta na-agụnye akụkụ dị mkpa nke akụkọ kwa ụbọchị na ụwa.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ achụmnta ego na-ejikwa ọrụ mmekọrịta mmadụ na nwanyị iji ohere a dị ukwuu maka ọha mmadụ. Ebumnuche ha kachasị na-abụkarị mmata mara mma, ọgbọ ndu, ịkwọ ụgbọala na ibe weebụ, mmụba ahịa, na ịkwalite ọrụ ndị ahịa.
N'ihi ya, ahia site na netwọkụ mmekọrịta aghọwo ihe kacha mkpa nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa. Emeela ọtụtụ ohere ọrụ maka ndị na - ere ahịa, ndị na - ewepụta ọdịnaya, ndị na - elekọta mmadụ na - elekọta mmadụ, ndị na - ese ihe nkiri, wdg. N’ime afọ iri gara aga.
O doro anya na ọrụ ndị a atawo ahụhụ karịa mpaghara ọ bụla n'oge ntiwapụ nke COVID-19. Ikike nke ịre ahịa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-agba ume agbapụta ụdị ndị ahịa dịpụrụ adịpụ.
Na ndị mmadụ na-eji ịntanetị na netwọkụ mmekọrịta karịa ka ọ dị na mbụ, ohere ọhụụ agwakọtara maka akara iji zụọ ngwaahịa na ọrụ ha.
Mgbe ị na-achọ ngwaahịa, 54% nke ndị mmadụ tụgharịrị gaa na mgbasa ozi mmekọrịta ha na nyocha ha. 49% nke ndị ahịa na-etinye ihe ha zụrụ na nkwanye ndị mgbasa ozi mgbasa ozi.
Obere azụmaahịa nwere ike iji ohere a mee mkpọsa n'ịntanetị. Nke a ga-abụ ihe arụ ọrụ nke ọma ma baa uru maka ha ma mee ka ndị na-eso ụzọ ha dịkwuo ike ma wusie ike ha.
Na nchikota, mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na ndụ anyị dị mkpa. Ya mere, ndị otu anyị nọ na Socialtradia kpebiri ichikota ma gosipụta data kachasị mkpa na nke a dị ka infographic.
N'agbanyeghị na ị bụ onye ọrụ ma ọ bụ na-ere ahịa, anyị na-akwado ka ị tụlee data a iji mata mkpa netwọkụ mmekọrịta.
Tags: edu ọgbọmụọnzụta mmetụtaelekọta mmadụ media infographicọhaneze mgbasa oziọnụ ọgụgụ mgbasa ozi mmekọrịtaelekọta mmadụ na netwọk mmetụtaọnụ ọgụgụ ntanetị mmekọrịtaelekọta mmadụChidinmaTikTokonye ọrụ mepụtara ọdịnaya
Tom bụ ọkachamara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị nwere ihe karịrị afọ 5 ahụmahụ na ụlọ ọrụ dijitalụ a. Ya na ụfọdụ ụdị ndị ama ama na-emekọ ihe iji wee nwee ike mepụta okporo ụzọ, mepụta ọwa ahịa, ma bulie ahịa n'ịntanetị. Odeela ọtụtụ ederede gbasara mgbasa ozi mgbasa ozi, ahịa ahịa, ịde blọgụ, nyocha ọchụchọ, wdg.